Họrọ na ebe igwe
Ihe nbipute Stencil
Ngwa ngwa nbipute na-akpaghị aka
Ihe nbipute na-ere ere
Ihe nbipute ọkara akpaaka
Ngwakọta tapawa solder
Igwe AOI na-anọghị n'ịntanetị
Igwe AOI dị n'ịntanetị
Ihe nri eletrọnịkị
Onye na-enye nri pneumatic
Igwe nhicha PCB
Igwe ikuku Compressor
Igwe nchekwa PCB akpaaka
Igwe nhicha nchara nchara
Igwe nyocha X-ray
Igwe na-ere ahịa Wave
BGA Rework ọdụ
Olee ngwa ngwa atụle nguzogide nke PCB elu ọla kọpa waya?
site admin na 21-11-12
Ọla kọpa bụ oyi akwa igwe na-eduzikarị n'elu bọọdụ sekit (PCB). Tupu ịkọwa nguzogide ọla kọpa na PCB, biko mara na nguzogide ọla kọpa na-agbanwe na okpomọkụ. Iji chọpụta nguzogide ọla kọpa n'elu PCB, enwere ike iji usoro a. Mgbe ole...
Kedu ihe igwe SMT AOI na-eme?
SMT AOI Machine Description Sistemụ AOI bụ usoro nyocha na nhazi ngwa anya dị mfe jikọtara ya na igwefoto, lenses, isi ọkụ, kọmpụta na ngwaọrụ ndị ọzọ a na-ahụkarị. N'okpuru ọkụ nke isi iyi ọkụ, a na-eji igwefoto eme ihe maka foto ozugbo, mgbe ahụ, a na-achọpụta ya site na com ...
Kedu ihe igwe na-ere ahịa Wave na-eme?
I. Wave Soldering Machine Types 1.Miniature ife soldering igwe Microcomputer imewe bụ tumadi etinyere na nkà mmụta sayensị nnyocha institutes, ụlọ akwụkwọ na ndị ọzọ R & D ngalaba, imeghari ka akporo nke mmepụta bụ a dịgasị iche iche nke obere ogbe, miniaturized ọhụrụ ngwaahịa nnwale mmepụta, ime ọ bụghị na...
Kedu Nkwadebe Kwesịrị Ime tupu igwe na-ere ahịa Wave?
The mmepụta usoro nke ife soldering igwe bụ nnọọ isi njikọ na niile nkebi nke PCBA mmepụta na n'ichepụta. Ọ bụrụ na emeghị nke a nke ọma, mbọ niile gara aga bụ ihe efu. Na mkpa na-emefu a otutu ume ịrụzi, otú e si achịkwa ife soldering usoro? 1. Lelee ...
Mkpa igwe nyocha X-ray dị
site admin na 21-11-04
X-ray: Aha zuru oke nke ngwa nyocha X-ray, bụ iji X-ray ike dị ala, nyocha nke ime ngwaahịa ahụ, chọpụta mgbawa dị n'ime, ihe ndị mba ọzọ na ntụpọ ndị ọzọ. Nke ahụ bụ ka ụlọ ọgwụ na-eme nyocha X-ray. The ọgụgụ isi na miniaturization nke eletrọnịkị ngwaahịa na-eme ka size nke ch ...
Gịnị bụ solder mado inspection igwe (SPI)?
I. Enwere ike ikewa nhazi nke igwe SPI igwe ihe nleba anya n'ime nha 2D na nha 3D. 1. 2D solder mado nnyocha igwe nwere ike na-atụle elu nke a ụfọdụ ebe na solder mado, 3D SPI nwere ike tụọ solder mado elu nke dum mpe mpe akwa, ọzọ nwere ike r ...
Ọdịiche dị n'etiti oyi akwa 2 na 4 PCB
site admin na 21-10-29
Ndabere nke SMT nhazi bụ PCB, nke a na-amata site na ọnụ ọgụgụ nke akwa akwa, dị ka 2-layer PCB na 4-layer PCB. Ugbu a, ihe ruru 48 n'ígwé nwere ike nweta. Teknụzụ, ọnụ ọgụgụ nke akwa akwa nwere ohere na-akparaghị ókè n'ọdịnihu. Ụfọdụ supercomputers nwere ọtụtụ narị oyi akwa. Mana ihe...
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti igwe na-ere ahịa Wave na Welding ntuziaka?
Na electronic ụlọ ọrụ, PCBA nhazi maka software ihe nwere ife soldering igwe na ntuziaka ịgbado ọkụ. Kedu ihe dị iche n'etiti ụzọ ịgbado ọkụ abụọ a, gịnị bụ uru na ọghọm? I. Ogo ịgbado ọkụ na arụmọrụ dị oke ala 1. N'ihi ngwa nke ERSA ...
Ụdị ihe mmetụta okpomọkụ anọ
site admin na 21-10-26
Ihe mmetụta okpomọkụ bụ otu n'ime teknụzụ ndị a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ngwaahịa taa, dị ka ụgbọ ala, ọkụ eletrik na ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Iji mee nha okpomọkụ a pụrụ ịdabere na ya, ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ihe mmetụta okpomọkụ kwesịrị ekwesị maka ngwa. N'okpuru...
Ịdọ aka ná ntị maka Usoro ịgbado ọkụ Board
site admin na 21-10-22
1. Tupu PCB tinye n'ime reflow oven ịgbado ọkụ, hụ na mpe mpe akwa nke components na sekit mbadamba bụ weldable (dị ọcha, ọ dịghị unyi, ọ dịghị oxidation, wdg). 2. Yiri mkpuchi antistatic mgbe nhazi na ịgbado ọkụ. 3. Yiri gloves ESD n'oge ịgbado ọkụ iji zere ujo eletrik. 4. Ọ bụrụ na ígwè eletrik kwesịrị ịbụ ...
Ụkpụrụ na-arụ ọrụ nke Cystal Oscillator
site admin na 21-10-20
Nchịkọta nke kristal oscillator Crystal oscillator na-ezo aka na wafer ịkpụ site na quartz kristal dị ka ụfọdụ azimuth Angle, quartz crystal resonator, nke a na-akpọ quartz crystal ma ọ bụ oscillator kristal; Ihe kristal nke etinyere IC n'ime ngwugwu a na-akpọ oscillator kristal. Ọ...
Ihe kpatara na ngwọta nke PCB Board Deformation
PCB distortion bụ a nkịtị nsogbu na PCBA uka mmepụta, nke ga-enwe a bukwanu mmetụta na mgbakọ na ule, n'ihi na electronic sekit ọrụ akwusighi ike, sekit mkpirisi / oghe sekit ọdịda. Ihe na-akpata nrụrụ PCB bụ ndị a: 1. Okpomọkụ nke bọọdụ PCBA p...
123456 Ọzọ > >> Peeji nke 1/14